Ụbọchị My Pet » Olee otú ịkọrọ unyi na a Mmekọrịta
Anyị niile hụrụ di na nwunye na-ekwu ruru unyi na fim, TV na ọbụna na-agụ ya na akwụkwọ ma ka ọ na-ọbụna na-arụ ọrụ? Na ndị ọzọ ihe, i kwesịrị ịme unyi okwu n'ime mmekọrịta gị?
N'adịghị ka nkwenkwe, mgbe na-ekwu okwu ruru unyi ị na-adịghị na-ekwu ihe ọ bụla ma ọ bụ weird si n'ebe iji nweta ihe ndị ha chọrọ mmetụta. Site n'ịgbaso n'okpuru Atụmatụ, i nwere ike tinye zest ka mmekọrịta gị na mmekọahụ ndụ mgbe ọ ka na ịbụ na ị.
Agbakwụnye ose: Dị nnọọ ka ngwa nri tinye ekpomeekpo ka nri, unyi okwu na-agbakwụnye flavor ka mmekọrịta. Otú ọ dị, ị kwesịrị ịkpachara anya ka ukwuu unyi okwu, dị nnọọ ka ukwuu ose, ga-agwụ ike na pụrụ ọbụna emebi mmekọrịta gị. Ka ịgbakwunye ụtọ, na-fun, na-agbalị iji ya ufat otú ahụ ọ ga-abụ na-akpali akpali na-atụghị anya oge ọ bụla ị na-eme na-ekwu ruru unyi ka onye gị na.
Nọrọ ala: Ihe kacha mkpa n'ọnụ bụ na-eme ma na-ekwu ihe ị na-ọma na. Ma ọ bụ ihe doro anya ma ọ bụ aghụghọ, ma ọ bụrụ na ị bụ kwa iru ala na-ekwu na ọ mgbe ahụ, ọ ga-akacha ada ihere kwa. Ma na-eme ihe n'eziokwu zuru oke, e nwere ihe ole na ole njọ karịa ihere unyi okwu.
Nwee aghụghọ: Akowara, mkpari, sexy, na graphic unyi okwu dị ukwuu maka ime ka ọ pụrụ iduga omiiko mmekọahụ. Ma ọ bụrụ na ị nwere aghụghọ mgbe ekwu okwu ruru unyi, ị ga-ahụ na ọ ga-ike a siri ike ezi mmetụta dị ka ọ na-emepụta mmekọahụ erughị ala na mgbakwunye na-eme ka onye gị mgbe niile na-eche banyere gị. n'ịbụ aghụghọ, n'ezie, nwere ike n'ezie ịbụ ike karịa ndị doro anya mgbe ekwu okwu ruru unyi.
Ihe ọzọ dị mkpa banyere aghụghọ ruru unyi okwu bụ na ị nwere ike ime ya dị nnọọ banyere n'ebe ọ bụla. Si a ọzọ iji nghọta si na enyi na-na-na-arụ ọrụ, a dị mfe “M ka ya bụrụ ndị a ndị mmadụ ọzọ na-abụghị gburugburu dị ka m nwere ụfọdụ fun ihe n'uche na m chọrọ ime ka ị”, ga-ahapụ onye gị na-eche banyere ihe kpọmkwem ị na-n'uche.
Akowara, ime okwu: Ka a na n'ọnụ bụ ihe dị nnọọ iche si n'elu, graphic ruru unyi okwu ga-eme ka mmekọahụ hotter, ihe na-akpali akpali, na ndị ọzọ omiiko – kpọmkwem ihe ọ bụla ga-na ime. Ekwela ka okwu n'ezoghị iduzi gị pụọ a igwuri egwu, sexy ime okwu. Nanị ịlụ ejide elu na oge na-ekwu ihe ị na-eche dị ka “ị na-eche otú ahụ ihe ọma m n'ime”, ga-bụghị naanị atụgharị onye gị na ma ga-aka egos nakwa. Ọ bụrụ na ị ka na-eche na ụjọ ma ọ bụ ihere, ọzọ ufiop “Hmm”, “yeah”, na “oh chi” -enye otu mmetụta.
Erotica: Eleghị anya ndị kacha n'ọnụ bụ na-agụ ma ọ bụ erotica romance akwụkwọ akụkọ. Ọ bụghị nanị na ha ga-agbasa gị ruru unyi okwu olu ma ga-enye gị ọtụtụ echiche maka ọnọdụ, ghọrọ onye ọzọ, na edoghi na mgbakwunye na-ahapụ gị tụgharịa karịsịa mgbe ị gụsịa agụ a nke uzuoku idaha.
Ma ị nọwo na gị na onye òtù ọlụlụ ọnwa ole na ole ma ọ bụ afọ iri, na-ekwu okwu ruru unyi pụrụ inye anyị ume na-ejikere, na-agbakwunye a dum ọhụrụ larịị ka mmekọrịta unu.